केशव स्थापितकाे भन्दा बालेनकाे भाेट झण्डै दाेब्बर (मध्यरातमा नयाँ अपडेट)
May 16, 2022 N88LeaveaComment on केशव स्थापितकाे भन्दा बालेनकाे भाेट झण्डै दाेब्बर (मध्यरातमा नयाँ अपडेट)
काठमाडाैँ । काठमाडौं महानगरपालिकामा मतगणना जारी छ । स्वतन्त्र उम्मेदवार बालेन साहले सुरुवातदेखिको अग्रता कायम राखेका छन् । आइतबार १, २, ३, ४ र ३२ को मतगणना हुँदा अग्रता लिएका उनले सोमबार थप वडाहरुको गणना हुँदा पनि अग्रता अझ फराकिलो बनाउँदै लगेका छन् । सोमबार रातिकाे प्राप्त अपडेट अनुसार स्वतन्त्र पदका बालेनले आठ हजार ६२० मत […]
भरपुतरमा भुइँकटहरको खेल शुरू, जगन्नाथले देखाउन थाले आफ्नै इलाकामा धमाका !
May 16, 2022 N88LeaveaComment on भरपुतरमा भुइँकटहरको खेल शुरू, जगन्नाथले देखाउन थाले आफ्नै इलाकामा धमाका !
चितवन । भरतपुर महानगरपालिको मेयरका स्वतन्त्र उमेदवार जगन्नाथ पौडेलले मत बढाउँदै लगेका छन् । कांग्रेसका बागी उम्मेदवार पौडेलले एउटै वडामा हजार बढी मत ल्याएका छन्। वडा नम्बर-४ को करिब एक हजार मत गन्न बाँकी रहँदा उनले आफ्नो भोट हजार कटाएका हुन्। पौडेलले वडा नम्बर १ बाट ४ सय ३०, २ बाट ४ सय ९४, ३ […]
भरतपुर महानगरकाे मतगणना रोकियो
May 16, 2022 N88LeaveaComment on भरतपुर महानगरकाे मतगणना रोकियो
चितवन । मत संकेतका विषयमा विवाद भएपछि भरतपुर महानगरपालिकाको मतगणना कार्य रोकिएको छ । मत संकेत गरिएको ठाउँमा स्वस्तिक छापको घेरामात्र देखिएको तर स्वस्तिक छाप नदेखिएपछि विवाद भएकाे हाे । निर्वाचन अधिकृतले त्यस्ता दुई मत बदर गरेपछि प्रमुख जिल्ला अधिकारी र प्रहरी प्रशासनले दबाब दिएको भन्दै एमालेका प्रतिनिधिले आपत्ति जनाएका छन् । दुईमध्ये एउटा माओवादी […]
केशव स्थापितभन्दा दोब्बर मतले बालेन अगाडि (राति १० बजेकाे ताजा अपडेट)
May 16, 2022 N88LeaveaComment on केशव स्थापितभन्दा दोब्बर मतले बालेन अगाडि (राति १० बजेकाे ताजा अपडेट)
काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाको मेयरका स्वतन्त्र उमेदवार बालेन शाहले अग्रता कायमै राखेका छन् । बालेनले आठ हजार ४२० मत पाउँदा एमालेका केशव स्थापितले ४४३६ र कांग्रेसकी सिर्जना सिंहले ३८१ मत पाएका छन् । बालेन स्थापितभन्दा ३९८४ मतले अगाडि छन् । महानगरका ८ वडामै बालेनले लिड गरिरहेका छन् । महानगरको वडा नम्बर १ र २ को मतगणना सकिएको […]
मोदीले लुम्बिनीमै आएर भने ‘बुद्ध नेपालमा जन्मेका हुन’
May 16, 2022 N88LeaveaComment on मोदीले लुम्बिनीमै आएर भने ‘बुद्ध नेपालमा जन्मेका हुन’
रुपन्देही । भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले नेपाल भारतबीचको साझा प्रेम नै यहाँको पुँजी भएको बताउनुभएको छ । २५ सय ६६ औँ बुद्धजयन्तीको मुल समारोहलाई लुम्बिनीमा सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री मोदीले यो पुँजी जति समृद्ध हुन्छ त्यति भगवान गौतम बुद्धको सन्देश फैलाउन सकिने उहाँको भनाई छ । मायादेवी मन्दिरको दर्शन अविश्मरणीय रहेको र यो पवित्र ठाउँ जहाँ भगवान […]
भरतपुर अपडेट : देवी ज्ञवालीको वडामा मत गणना हुँदा रेनुलाई अग्रता (मतसहित)
May 16, 2022 N88LeaveaComment on भरतपुर अपडेट : देवी ज्ञवालीको वडामा मत गणना हुँदा रेनुलाई अग्रता (मतसहित)
काठमाडौं । चितवनको भरतपुर महानगरपालिकाको मेयरमा माओवादीकी रेनु दाहालले ५ हजार ६६ मतसहित अग्रता बनाएकी छन् । नेकपा एमालेका विजय सुवेदीको ५ हजार ५६ मत रहेको छ । भरतपुरमा आज बिहानदेखि सुवेदीले अग्रता लिएका थिए । तर, एमले नेता देवी ज्ञवालीको वडामा मतगणना हुँदा रेनुले अग्रता बनाएकी हुन् । भरतपुरको मेयरमा बागी उम्मेदवार जगन्नाथ पौडेलको […]
कामपामा बालेन्द्रकै अग्रता कायम, कसकाे कति मत ?
May 16, 2022 N88LeaveaComment on कामपामा बालेन्द्रकै अग्रता कायम, कसकाे कति मत ?
काठमाडाैं । काठमाडौँ महानगरपालिकामा प्रमुख पदका लागि स्वतन्त्र उम्मेदवारले नै अग्रता कायमै राखेका छन् । केही समय अघि प्राप्त मतपरिणामअनुसार प्रमुख पदका स्वतन्त्र उम्मेदवार बालेन्द्र साहले ६ हजार ३९८ मत प्राप्त गरी आफ्नो अग्रता कायम राख्नुभएको हो । त्यसैगरी प्रमुख पदकै उम्मेदवार नेकपा (एमाले) का केशव स्थापितले तीन हजार ३४७ र नेपाली कांग्रेसका सिर्जना सिंहले […]
गन्दा गन्दै मतपत्र च्यातियो, सेना र सशस्त्र प्रहरी जाँदै
May 16, 2022 N88LeaveaComment on गन्दा गन्दै मतपत्र च्यातियो, सेना र सशस्त्र प्रहरी जाँदै
काठमाडाैं । ओखलढुंगाको चिसंखुगढी गाउँपालिकामा कांग्रेसका प्रतिनिधिले मतपत्र च्यातेका छन्। वडा नं ३ को मतगणना भइरहँदा विवाद भएपछि मतपत्र च्यातेको सुरक्षा स्रोतले जनाएको छ। मतपत्र च्यात्ने व्यक्तिलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको छ। अहिले नेपाली सेना, सशस्त्र प्रहरी र नेपाल प्रहरीको थप टोली ओखलढुंगाबजारबाट चिसंखुतर्फ लागेको छ। त्यहाँबाट पुग्न २ घण्टा बढी लाग्छ। सर्वाधिक चासाेका साथ हेरिएकाे चितवनकाे […]
काठमाडौंमा १९ हजार मत गन्दा बालेनको ७ हजार ७७१ मत, स्थापितकाे कति ?
May 16, 2022 N88LeaveaComment on काठमाडौंमा १९ हजार मत गन्दा बालेनको ७ हजार ७७१ मत, स्थापितकाे कति ?
काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकामा मेयरका स्वतन्त्र उम्मेदवार बालेनले अग्रता जारी राखेका छन् । करिब १९ हजार मत गणना हुँदा बालेनले सात हजार ७७१ मत पाएका छन् । एमालेका केशव स्थापितले चार हजार ११३ मत पाएका छन् । कांग्रेसकी सिर्जना सिंह तीहजार ५७३ मतसहित स्थापितलाई पच्छ्याइरहेकी छन् । हालसम्म १३० पालिकाको मतपरिणाम सार्वजनिक स्थानीय तह निर्वाचनको जारी […]
भरतपुरमा फेरि पासा पल्टियाे, एकाएक रेनु अगाडि कति छ मतान्तर ? (अपडेट)
May 16, 2022 N88LeaveaComment on भरतपुरमा फेरि पासा पल्टियाे, एकाएक रेनु अगाडि कति छ मतान्तर ? (अपडेट)
चितवन । भरतपुर महानगरपालिकामा मेयरका उम्मेदवार माओवादी केन्द्रकी रेनु दाहालले पुनः अग्रता बनाएकी छन् । कुल १५ हजार ३१ मतगणना गर्दा रेनु दाहालले ५०३९ मत प्राप्त गरेकी हुन् । यस्तै एमालेका उम्मेदवार विजय सुवेदीले ५०२७ मत पाएकी छन् । रेनु र विजयको मतान्तर १२ मत रहेको छ । यस्तै स्वतन्त्र उम्मेदवार जगन्नाथ पौडेलले २३५५ मत […]